शिशु जन्मदा आमाको तौल कति घट्छ ? – Mahilajagaran
शिशु जन्मदा आमाको तौल कति घट्छ ?
एजेन्सी : महिला गर्भवती बनेपछि शिशुको जन्म नहुन्जेल उनको तौल बढ्ने गर्दछ । पेटमा हुर्कदै गरेको शिशुको आकारसंगै महिलाको शरीरमा मोटोपना बढ्ने गर्दछ । तर यो तौल कति समय रहन्छ ?
गर्भवतीको समयमा प्राय सबै महिलाको तौल बढ्नु स्वभाविक हो । तर बच्चा पाईसकेपछि पनि महिलाको तौल उस्तै रह्यो वा झनै बढ्दै गयो भने त्यसलाई स्वभाविक मान्नु हुदैँन । बच्चा पाएपछि महिलाको शरीरको तौल घट्नु पर्दछ । तर यसो भन्दैमा गर्भवती हुदाँ सरहको तौल भने आउन निकै ग्राहो हुन्छ ।
गर्भधारण गरेदेखि बच्चा नजन्माउञ्जेल महिलाको तौल निरन्तर बढ्ने गर्दछ । यस समय महिलाले आफूलाई भन्दा आफ्ना पेटभित्र हुर्किरहेका शिशुको बारेमा धेरै सोच्ने गर्छिन् । त्यसकारण आफ्नो बढिरहने तौल बारे महिलाको ध्यान जाँदैन । तर अधिकाशं महिला बच्चा जन्माइसकेपछि पुरानै शारीरिक संरचनामा आवोस् भन्ने चाहान्छन् ।
शिशु जन्माएपछि महिलामा केही तौल कम हुने गर्दछ । यो स्वभाविक हो । शिशु जन्मेपछि तुरुन्तै महिलाको शरीरबाट करीब ५–६ किलोग्राम तौल घट्ने गर्दछ । शिशु जन्मिने बेला शिशुसहित सालनाल जसलाई एम्नियोटिक फ्लुइड निस्किने गर्दछ । त्यसबेला रक्तस्राव पनि हुने गर्दछ । यसकारण बच्चा जन्मिने बित्तिकै महिलाको शरीरबाट तुरुन्तै ६ किलोग्रामसम्म तौल घट्ने गर्दछ ।
जनसंख्याको २०–२५ प्रतिशत मानिसमा मानसिक समस्या
१२ हजार भेडा–च्याङ्ग्रा निकासी
जुम्लाको प्रतिष्ठानलाई साढे ६ लाखको स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान
प्रतिष्ठानलाई प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण